Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Umenzi, Andrew Wood, uMongameli omtsha we-SKAL ASIA
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • abantu • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
I-SKAL ngekhe inyule inkokeli ebhetele ukuba ikhokele i-SKAL Asia kunye namalungu ayo kwisigaba sokugqibela sengxaki ye-COVID-19. UAndrew Wood unento ayifunayo.
"Omnye wethu ngoku nguMongameli we-SKAL Asia", utshilo eTurboNews Umshicileli uJuergen Steinmetz. UAndrew wayekhe wanjalo ukufaka isandla kupapasho lwethun njengoko iThailand yethu ibhala imbalelwano iminyaka emininzi.
Kwi-AGM ebonakalayo ye-Skål International Asia ebibanjelwe ngaphambili namhlanje kwi-50 yeAsiya yeNdibano eNkulu yoNyaka ibibanjelwe kwaye yonyula u-Andrew J Wood ongu-Mongameli 2021-2023.
Phambi konyulo Wood, ethathelwa ingqalelo njengeyona ndawo ibonakalayo yeSkålleagues, yayinguSekela Mongameli wase-Skål Asia (mpuma mpuma).
Ilungu leSkål kangangeminyaka engama-29 lonyulwa okokuqala kwibhodi yaseAsia ngo-2005. UWood, owayefanele ukugqiba ixesha lakhe lesibini njengoMongameli weyona klabhu indala yaseThailand - iBangkok, uzakudlulisela iintambo kuJames Thurlby, onyulwe njengoMongameli omtsha waseBangkok.
I-Skål Asia inamalungu angama-2529 kwiiKlabhu ezingama-39, ezingama-28 eziqokelelwe kwiikomiti ezi-5 zikazwelonke, kunye neeklabhu ezili-11 ezimanyeneyo, iSkål Asia Area (SAA) yeyona ndawo yahlukileyo kwihlabathi laseSkål. Indawo yaseAsia isuka eGuam kuLwandlekazi lwePasifiki ngaphezulu kwe-10,000 yeekhilomitha ukuya eMauritius kuLwandlekazi lwaseIndiya kunye neeklabhu kumazwe ali-15 anomdla phakathi. Indawo yaseAsia yenza phantse iipesenti ezingamashumi amabini kuwo onke amalungu eSkål International.
“Kubo bonke abantu bam baseAsia Skalleagues Nditsho ukuba, njengoMongameli abaninzi phambi kwam ndiwuthobile umsebenzi ophambi kwethu, ndinombulelo ngentembeko osinike yona.
"Ndihlala ndikhumbula amazwe ali-15 esiwakhonza phantsi kweSkål Asia kunye nesidingo sokusebenzisana ukwakha ubuhlobo obomeleleyo kwiziseko eziqinileyo", utshilo uMongameli uWood.
“Abadlali abakumgangatho ophezulu kuyo yonke indawo bahlala bethembekile kwiinjongo zookhokho bethu bolonwabo kunye nobuhlobo. Kwaye kuye kwaye kufanele ukuba njalo kwisizukulwana sethu esitsha seSkålleagues.
“Ukwakha iibhulorho, uvelwano nemfesane ziya kuba yeyona nto iphambili kum. Emva kobhubhane, xa ixesha lilungile, kufuneka siphakame, siphume siye kuvula iingalo zethu kwaye sivumele ukukhanya kukhanye kubomi bethu kwakhona, utshilo uMongameli uWood.
UWood ukwakhuthaze amalungu akhe ukuba ajonge kwikamva ngentembelo ehlaziyiweyo, “Uqoqosho lwethu lunokuba buthathaka kakubi ngenxa yemida evaliweyo. Akukho mntu unokujongela phantsi umonakalo wehlabathi kushishino lwethu. Kodwa ke isinike ithuba elinqabileyo lokucinezela iqhosha lokuseta kwakhona, ukulungisa okungalunganga okudlulileyo kwaye ukubenze balungile.
Uye wongeza, "Ilizwe elitsha lokuhamba nokhenketho lilindele. Umhlaba omtsha olambele ukuhamba, onoxolo, ozinzileyo kwaye iSkål Asia ngokuqinisekileyo inkulu, inobuhlobo kwaye inethemba ngakumbi. ”
Umshicileli we-eTN uJuergen Steinmetz, okwangusihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi uthe: "Ndandineminyaka emininzi ndimazi uAndrew. NjengoGM ihotele enkulu iBangkok, wayengumthengi olungileyo eTurboNews.
“Emva kokuthatha umhlala-phantsi, wayehlala enegalelo kupapasho lwethu. Ujoyine iWorld Tourism Network (WTN) njengelungu. Ukuba lilungu le-SKAL ngokwam, ndiqinisekile ukuba i-SKAL Asia yenza isigqibo esigqibeleleyo sokukhetha inkokheli yokwenyani, umenzi, kunye nendoda enombono.
“Ubunkokeli bakhe buza kuvula amathuba amatsha phakathi kwe-SKAL Asia kunye ne-World Tourism Network. Andrew, Siyavuyisana! ”
Ngaphandle kweenkongolo kwihlabathi le-Skål okoko kwaqala ubhubhane kwiminyaka emi-2 eyadlulayo, uWood uthe uyavuya kuba izicwangciso sele ziqhubele phambili kwi-Skål Asia Area Congress ngoJuni ka-2022 xa iThailand izakubamba umhlangano ophefumlelweyo #RediscoverThailand Asia Area Congress ekulindeleke ukuba itsale abathunywa abangama-300 kwinkomfa yeentsuku ezi-4 (ezi-3 zobusuku).
Umongameli wase-Skål Asia uqukumbele ngokuthi, “Imiceli mngeni esijongene nayo namhlanje kwihlabathi elitsha elihamba ngomso, ziyinyani. Zinzulu kwaye zininzi. Anditsho ukuba kuyakuba lula okanye ukudibana ngokukhawuleza, kodwa baya kudibana. Ngomso ufikile. ”